Ukuhweba Bots ngoba Cryptotrading - Blockchain Izindaba
ukwenza bot abasebenzela cryptotrading kanjani?
Bot khona ngesimo isofthiwe, okuyinto, ezimweni eziningi, isebenza ngqo mfihlo-Ukuhwebelana ngokusebenzisa esibonakalayo hlelo (I-API). Umgomo bot ukwenza ngokuzenzakalelayo ukuthengiselana onamafa: kwalokhu, i-bot azokuqhubela analysis eningiliziwe ulwazi emakethe futhi, esekelwe idatha etholwe, wathatha izinqumo mayelana ukuthengiselana ephetha. Kuye isu ekhethiwe, setha nemingcele futhi uzibekele imigomo, abadayisi Ungakhetha ukuthi wayengenye yamadoda amane izinhlobo bot:
Ukuhweba bot ahlaziye ulwazi etholakele mfihlo-exchange, nokwenza izinqumo mayelana ukuthenga nokudayisa cryptocurrency esekelwe nemingcele ekhethwe abadayisi. Lolu hlobo lwe-bot kungenziwa egcizelele ukusebenza nemingcele eziningana ngesikhathi esisodwa, noma ungasebenzisa amasu achazwe ezakhiwa abahlaziyi.
Arbitrage bot ukuqapha izinguquko ezingcaphunweni ka Cryptocurrency ku Ukuhwebelana ehlukahlukene ngokuzenzakalelayo ukuthengiselana ukuthola inzuzo kusukela umehluko intengo.
Custom bot, noma umyalelo bot, zisetshenziselwa ukwenza ukuthengiselana ngezimiso achazwe ukuthi efakiwe ngesandla noma akhethiwe kwimodi okuzenzakalelayo.
Iskripthi bots khona ngesimo isofthiwe eyisisekelo, ngesisekelo okuyinto abadayisi ingakwazi ukumisa umsebenzi we bot. Kusetshenziswa abahwebi abanolwazi abakwaziyo butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela yokuhweba Crypto Market.
Izingozi Ukuhweba Bots ku Crypto Market
onesici isofthiwe: akubona bonke bot ezitholakalayo okwamanje abangu iqembu Konjiniyela futhi abanolwazi abahwebi mfihlo umkhankaso. Ngaphezu kwalokho, i-bot, likabani ikhodi iphutha senziwa, angeke nje ukungasebenzi kahle, kodwa futhi kubangele ukulahlekelwa enkulu yezimali, ikakhulukazi lihambisana isu kabi ekhethiwe. Ngakho-ke, ukuhwebelana kuwufanele ngokukhetha bot efakazelwe kuphela idumela esingasethemba amathuluzi anhlobonhlobo.
nciphisa leso we cryptocurrency: cryptocurrencies Uyigugu oluyingozi kakhulu, hhayi insured wokulwa eMpumalanga. Ngakho, ngo-June 2017, ngesikhathi GDAX lokushintshisana, ngenxa into enkulu, intengo emoyeni sesehle sisuka $ 319 ukuze 10 amasenti. Ngenxa yalokho, abahwebi abangazange basethe stop-ukulahlekelwa imikhawulo, indaba imizuzwana, balahlekelwa omkhulu. Mayelana nalokhu, abanye abadayisi bayaqiniseka ukuthi bot bayakwazi ukusebenza kuphela ezimweni ejwayelekile kanye abadayisi wazibonela ngeke ukubikezela ngokunembile isimo emakethe.
Ukukhwabanisa: emakethe angahlelekile, Ezimweni cryptocurrency lokukhwabanisa zenzeka kaningi, nokusebenza bot iyathinteka. Ngo-December 2017, the Hexabo umkhonyovu bot eziqhutshwa ngenkuthalo emakethe, uvimba imali yomsebenzisi, okwesikhashana ekhishwa lwemali mfihlo, bese liyeke ukusebenza, mhlawumbe ngokuthumela zonke izimali Onjiniyela yesikhulumi. Futhi, Ngokwencwadi ethile, umthengisi, kufanele ugweme ethandwa bot khulula, ngoba ndawonye nabo ungalanda isofthiwe enonya, ngenhloso okuyinto ukufinyelela wallets yangasese okhiye noma usebenzise node abadayisi ukuze yezimayini.
Bots Idume Cryptotrading
3okhefana kuyinto ethandwayo bot kukhokhelwe cryptotrading ezenzakalelayo, elisebenza ngayo Ukuhwebelana ezifana Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi futhi YOBIT. Kanti inikeza Ukukhetha enkulu amaphothifoliyo isabalalise ukuthi abasebenzisi bangakhetha ukutshala noma ukusebenzisa njengoba ithuluzi kohlaziyo ukulandelela izimo emakethe. Linikeza ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa oda stop-ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo. It has amazinga amane okubhaliselwe – “kokuqala” ngoba $ 30, “Ukuhweba” ngoba $ 50, “professional” ngoba $ 100, futhi “ngamunye” ngoba isivumelwano.
Cryptohopper kuyinto bot cloud-based ikhokhwe azosebenza ngisho noma ikhompyutha abadayisi sika ngaphandle kwe-intanethi noma ukuvala. abahwebi abanolwazi ingakwazi ngezifiso umsebenzi we bot, ngenkathi Wabasaqalayo angasebenzisa etholakalayo “sasilokhu”. I bot Ungase futhi ahlaziye futhi uqinisekise ukusebenza signal yokuhweba uhlelo enziwa esikhathini esidlule (backtest), has a algorithm Stop Loss ukulawula oda, futhi kungaba ukudayisa ngokuqondile ku Ukuhwebelana eziningana. It has ezintathu izinhlobo ukuthenga nyangazonke – ngoba $ 19, $ 49 futhi $ 99. A ukuhlaziya okuningiliziwe kwendawo yesikhulumi ingatholakala lapha.
Cryptotrader ingenye ethandwa kakhulu ifu cryptobots ukuhwebelana. Isekela inqwaba mfihlo-zezimali kanye Ukuhwebelana. Kumele ngokugcwele abekiselwe ngumsebenzisi. Ukunikezwa backtesting futhi amasu emakethe nemisebenzi, okuvumela abasebenzisi ukudayisa amasu. It has amazinga ezinhlanu ukuthenga nyangazonke: ngoba 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC futhi 0.0214 BTC.
Haasbot kuyinto platform for ukuhweba okuzenzakalelayo, okuhloswe, okokuqala nje, I-abanolwazi bitcoin-abahwebi. Usebentisa emasu ethathwe lobuchwepheshe analysis idatha. Lokhu bot ikhokhelwa futhi inamazinga amathathu ekubhaliseni konyaka: ilayisensi “Beginner” ngoba 0.073 BTC, “Simple” ngoba 0.127 BTC kanye “enwetshiwe” ilayisensi, okuyinto izindleko 0.208 BTC. Kuye ilayisense uthenge, abasebenzisi ungalungiselela bot eziningana oxhumene ukuthi uzokwazi ukwenza eziningi imisebenzi ehlukene.
Gekko kuyinto khulula ovulekile bot ukuthi ingalandwa ku GitHub. Kuyinto elula ngokwanele ukusebenzisa, has ezinemininingwane yesinyathelo ngesinyathelo imiyalelo ukuthi kuyoba usizo for abadayisi ongenalwazi. Ingabe esisizayo, Ungakwazi backtest amasu kanye ngeso lengqondo imiphumela zokuhweba. Ngaphezu kwalokho, isofthiwe bot iqhuba izinhlelo kakhulu yokusebenza.
Zenbot kungenye ovulekile bot ngoba bitcoin abahwebi. Abasebenzisi bot Ungalanda ikhodi bese wenze ushintsho emsebenzini walo, futhi algorithm yayo iyatholakala wokusebenza main. futhi, ngokungafani Gekko, Zenbot ongenza ephezulu imvamisa ukuthengiselana kanye ukusebenzisa amathuba Arbitrage. Nokho, emphakathini mfihlo liphawuleka ukuthi bot alukabuyekezwanga isikhathi eside, ngakho-ke ayinakho ithuba ukusebenza Ukuhwebelana entsha ethandwa.
Bot ngoba Cryptotrading
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 10.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 11.05.2018